खानेपानी मन्त्रीद्धारा २ रुपैँयामै पानी पिउन पाइने ‘वाटर एटीएम’ को निरीक्षण – Everest Dainik – News from Nepal
खानेपानी मन्त्रीद्धारा २ रुपैँयामै पानी पिउन पाइने ‘वाटर एटीएम’ को निरीक्षण
२५ असोज, काठमाडौं ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सक्रियतामा नेपालमा पहिलो पटक वाटर एटीएमको नमुना सार्वजनिक गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरको प्रमुख आतिथ्यमा बिहीबार आयोजना गरिएको वाटर एटीएमको नमुना सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री मगरले एटीएमको निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।
एटीएमबाट पानी झारेर उहाँले पानी पिउनुभएको थियो । यस्तो प्रविधि नेपालमै पहिलो पटक सार्वजनिक भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. संजीव विक्रम राणाले जानकारी दिनुभयो ।
ललितपुरको सैंबु, भैंसेपाटीस्थित बोर्डको परिसरमा वाटर एटीएमको नमुना प्रदर्शन गरिएको थियो । वाटर एटीएमलाई नेपालीमा पँधेरो नामाकरण गरिएको छ । निश्चित थोरै पैसा तिरेपछि पानी पिउन पाईने अवधारणा स्वरुप वाटर एटीएमको सुरुवात गरिएको हो ।
उक्त एटीएमबाट २ सय मिलि लिटर र एक लिटर पानी झारेर पिउन पाईने व्यवस्था गरिएको छ । २ सय मिलिलिटर पानीको मूल्य दुई रुपैंया र एक लिटर पानीको मूल्य १० रुपैंया राखिएको छ । उक्त एटीएममा दुई रुपैंयाको क्वाईन हाले पछि पानी झर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने छुट्टै एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर पनि पानी पिउन पाईने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो खालको वाटर एटीएम पहिलो चरणमा ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायरमा राखिने र विस्तारै काठमाडौं उपत्यका भित्र विस्तार गर्दै लगिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राणाले बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकामा मान्छेको चाप बढी भएको ठाउँहरुमा पहिलो चरणमा वाटर एटीएम राख्दै लगिने जानकारी दिनुभयो । यो वर्षभित्र २० वटा वाटर एटीएम राखिने बोर्डको भनाई छ ।
ट्याग्स: Minister Bina Magar
सिँढी चढ्दाचढ्दै लडे मोदी!
भारतद्वारा वेस्ट इन्डिजलाई २८८ रनको लक्ष्य, शतक बनाउन चुके पन्त र अय्यर
‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला’ निर्माणले गति लिँदै (हेर्नुस् २२ फोटो)
विश्‍वयुद्धको बम भेटिँदा ५४ हजारलाई सहरबाट हटाइयो
सतुङ्गलमा रहेको गौरीशंकर पेन्ट्स कारखानामा आगलागी
पौडेल पाथिभरा गएका बेला देउवाले गराए यस्ता निर्णय (सूचीसहित)
बहिनीसँग आपत्तिजनक अवस्थामा भेटेपछि साथीको हत्या
टेष्ट सिरिजः श्रीलंकाविरुद्ध बाबरको शानदार शतक